ကမ္ဘာ့ချစ်ပ်ပြားများ ပြတ်တောက်မှု Volvo က အမေရိကန်တွင် ထုတ်လုပ်မည် - Pandaily
Categories: Industry ကိုGloria Li မတ် 18, 2021 မတ် 18, 2021 မှာ Posted
တရုတ်ကားကုမ္ပဏီ Zhejiang Gilley Holdings ရဲ့ Volvo Motor က သူတို့အနေနဲ့ ယခုလအတွင်း ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ ပြောတာကို တရုတ်နဲ့အမေရိကန်စက်ရုံတွေက ကမ္ဘာ့ချစ်ပ်ပြားရှားပါးမှုကို ကိုးကားပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောပါတယ်။
ဆီြဒင္ကားထုတ္လုပ္သူတဦးရဲ႕ အီးေမးလ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ “က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အေျခအေနဟာ ဒုတိယသံုးလပတ္မွာ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္၊ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လုပ္ေဆာင္ေနရပါတယ္” လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ရိုက်တာ.
Volvo က တိုက္ပိတ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပြင်းထန်တဲ့ semictional craft ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကားလုပ်ငန်းတွေမှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီး အထူးသဖြင့်တော့ chip တွေ ပါဝင်လာတာကြောင့် ယာဉ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ထိန်းချုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်၊ ဘရိတ်၊ လေအိတ်နဲ့ ဖျော်ဖြေရေးစနစ်တွေအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ကားထုတ်လုပ်ရေး General Motor ကုမဏီက တနင်္လာနေ့မှာ ကြေညာလိုက်တဲ့ ချစ်ပ်ပြားမရှိတာကြောင့် အပေါ့စား အရွယ်အစား ပြည့်ဝတဲ့ ပစ်ကပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ဆီစားနှုန်းသက်သာတဲ့ စီးပွားရေးမော်ဂျူးတွေ မပါရှိပါဘူး။ ဂျပန်ထုတ် Honda Motor က လာမယ့်အပတ်ကစပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို ယာယီရပ်ဆိုင်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်ဟာ နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ကုန်ခမ်းသွားပြီလို့ အင်္ဂါနေ့က ပြောပါတယ်။
သုေတသနကုမၸဏီ IHS Markitကားရှားပါးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မယ့် ကမ္ဘာ့မော်တော်ကား လုပ်ငန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်မှာ ကားအစီးရေ ၇၀၀၀၀၀ နီးပါး ထုတ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒီဝေဒနာဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စိတ်ဒဏ်ရာတွေဖြစ်စေပြီး ကိုယ်ပိုင်ကားလုပ်ငန်းမှာ စိတ်ဒဏ်ရာတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အစောပိုင်းက COVID-19 Pop Shocks စီးပွားရေးကုမ္မဏီဟာ ကားထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာကြောင့် အနာဂတ်မှာ ကားထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့မတွက်ကြတဲ့အတွက် ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှုကို ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အော်တိုအော်တိုထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့တာဝန်မကျေဘဲ စောစောစီးစီး အော်တိုအော်တိုအော်တိုလုပ်နေချိန်မှာ ချစ်ပ်ပြားထုတ်လုပ်သူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှ သူတို့အရံအတွက် ထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဝေါစထရိဂျာနယ် သတင်းပေးပို့သည်။
Topics: မြင်ကွင်းGlucky Volvo နဲ့ ပေါင်းစည်းပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမယ့် ကုမ္ပဏီသစ် ပေါင်းစည်းပြီး ပရိသတ်အင်အားစုဆောင်းမည်
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားကလည္း စားသံုးသူ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုတ္လုပ္ေသာ Chip မ်ားေရာင္းအားတက္လာေသာေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း၊ အိမ္သံုးသံုးစြဲမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ လက္ေတာ့ပ္၊ ကြန္ျပဴတာ၊ ဆာဗာ၊ စမတ္ဖုန္း၊ ဗီဒီယိုဂိမ္းစက္မ်ားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားဖုန္းကုမၸဏီႀကီး ဆမ္ေဆာင္းက ယခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ Galaxy Note (Samsung Flagship Smartphone) အသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ျပသျခင္းျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ မညီမွ်မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။
တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးစက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ရက္သတၱ ပတ္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ကမၻာတစ္၀န္း၌ မၾကံဳစဖူး ခ်စ္ပ္ရွားပါးမႈကို ခံစားခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အာရံုစိုက္ခ်င္ပါတယ္. ” အဲဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္
တရုတ်ပွဲစားများက Chaun Securities ဟောကိန်း ချစ်ပ်ပြားရှားပါးမှုရဲ့ သက်ရောက်မှုဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယသုံးလပတ်အထိ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလမှာ Volvo က သူ့ရဲ့ စက်ရုံများ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ Supply Chain ေၾကာင့္ ဖိအားမ်ား ႀကံဳေနရသည္။